सोमराज भन्थे- नआत्तेऊ, पैसा कमाएर... :: नारायण खड्का :: Setopati
गत वर्ष दाङको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर ५ की ३२ वर्षीया खिमा वली रूखबाट लडेर घाइते भइन्।
स्याउला काट्न रूख चढेकी उनी त्यसपछि न उभिन सकिन् न त हिँडन् नै। बबरपुरस्थित काठको घरमा उनका चौबिसै घन्टा भुइँमा लडेरै बित्छन्।
वर्षदिन अघिसम्म खेतीपाती, वस्तुभाउको रेखदेख अनि घरदैलोको काम उनकै काँधमा थियो।
अचेल यी सबै काम सकेर उनका सासूससुरा बिरामी बुहारीको रेखदेख र स्याहार गर्छन्।
खिमाका छोरा तुलसीपुरस्थित एक निजी विद्यालयमा ८ मा र छोरी कक्षा ११ मा पढ्छन्। घरमा सासूससुरा र खिमामात्रै छन्।
कसैले नउठाइन्जेल खिमा जहाँको त्यहीँ पल्टिरहन्छिन्। खानपानदेखि दिसापिसाब सबै सुतेकै ठाउँमा हुन्छ।
भन्छन् नि- दु:ख एक्लै आउँदैन!
गत फागुन १ गते खिमाको जीवनमा अर्को ब्रजपात भयो।
उनका श्रीमान सोमराज वली रोजगारीका सिलसिलामा दुई वर्षअघि दुबई पुगेका थिए। श्रम स्वीकृति नलिइकनै दुबई गएका उनले त्यहाँ काम थाले। यता खिमा रूखबाट खसेपछि दैनिक खर्चसँगै उनको उपचारका लागि सोमराजले थप काम गर्नु पर्‍यो। उनी खिमालाई ढाडस दिन्थे- नआत्तेऊ, म तिमीलाई पहिलाजस्तै हिँड्ने बनाउँछु।
श्रीमानको ढाडसले भुइँमा लडेकी खिमा उठेर ठमठम हिँडेको कल्पना गर्थिन्।
जीवन सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र!
भवन निर्माणको काममा खटेका सोमराज गत माघमा बनिरहेको घरबाट लडे।
सोमराजका बुवा गंगारामले माघ ९ गते छोरा लडेर घाइते भएको खबर त्यहाँ रहेका नेपालीबाट पाएका थिए। कसैले ६ गते लडे भने कसैले ८ गते। उनीहरूले सोमराजको स्वास्थ्य अवस्था सुधार उन्मुख रहेको हुँदा नआत्तिन भनेका थिए।
ओछ्यानमै रहेकी खिमालाई श्रीमान् लडेर घाइते भएको खबर कसैले दिएनन्। उनी आफैंले मितिनी बहिनीलाई फोन गरेपछि मात्रै घटनाबारे थाहा पाइन्।
गम्भीर घाइते उनको उपचारका क्रममा माघ १२ गते दुबईमै मृत्यु भयो।
लामो पक्रियापछि फागुन १ गते सोमराज घर फर्किए-तर बाकसभित्र।
खिमा श्रीमानको शव हेर्न जान सकिनन्। पतिको मृत्युको शोकमा किरिया बस्न सक्ने अवस्थामा उनी छैनन्। छोरा सानै छ। बाबु गंगाराम किरिया बसेका छन्।
सोमराजको मृत्युपछि किरिया खर्च जुटाउन पनि वली परिवारलाई मुश्किल परेको छ। काम गर्ने क्रममै लडेर मृत्यु भएका सोमराजका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत् कम्पनीले एक पैसा पनि पठाएको छैन। उनीहरूसँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने आधार पनि छैन।
बुवा गंगारामले छोराले विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसा र छरछिमेकमा ऋण गरेर हालसम्म बुहारीको उपचार गर्दै आएका थिए। केही समय काठमाडौं पनि बसे। अस्पतालले भनेको जति पैसा जम्मा गर्न नसकेपछि घर फर्किए।
डाक्टरहरूले खिमाको उपचार गर्न झन्डै ६० लाख खर्च लाग्छ भनेका छन्। उपचार नभए खिमाको आधा शरीर अब कहिल्यै चल्ने छैन।
खिमाको सपना आफ्नै खुट्टामा उभिने छ। आफ्ना सन्तानलाई पढाउने र सासूससुराको रेखदेख गर्ने चाहना छ।
‘बुहारीले सेवा गर्नुपर्नेमा उल्टै मेरो सासूससुराले सेवा गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ खिमाले गहभरि आँशु पार्दै भनिन्, ‘म सबैको सहयोग पाए फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिएर गरिखान सक्छु।’
सामाजिक सञ्जालमार्फत् कतिले अपिल गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीबाट समेत सहयोग जुटाउन प्रयत्न गरेका छन्। अहिलेसम्म झन्डै ३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको बताइएको छ।
करिब एक लाख नगद बैंकमा जम्मा भएको छ।
नेपाल बंगलादेश बैंकको हापुरे शाखामा खिमा र बहिनी गोमाको संयुक्त खाता खोलिएको छ। सहयोग गर्न चाहनेले ०६४००३७११ मा स्वेच्छाले रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन १५, २०७६, १४:००:००